apple kusvetuka usb-c pane iphone 12 / pro 5g usati waenda portless gore rinouya
Kuru Nhau & Ongororo Apple kusvetuka USB-C pane iPhone 12 / Pro 5G usati waenda kusingafadzi gore rinouya
Apple kusvetuka USB-C pane iPhone 12 / Pro 5G usati waenda kusingafadzi gore rinouya
Kunyangwe kutora USB-C pane iyo iPad Pro muna 2018 uye kunyangwe kuyedza yakakurumbira chinongedzo pane mamwe ma prototypes e iPhone mumakore achangopfuura, Apple yakambosarudzazve kukodzera inotevera iPhone nhepfenyuro neayo proprietary Mheni chiteshi.
Apple iri kuronga zvekare rimwe gore reMheni
Leaker Fudge ine yakatsiga track rekodhi kana zvasvika kune Apple kudonha. Mumwedzi yapfuura akagovana iPhone 12 Pro sketch iyo yakaratidza iyo nyowani kamera marongero uye yakadzama akati wandei maIOS 14 maficha.
Zvino, tipster inoti iyo USB-C iPhone 12 prototypes iyo yanga ichishandiswa mukati haina kupihwa iyo green green yekugadzira. Apple yasarudza kunamatira kune inobata magetsi Mheni yekubatanidza, iyo yakatanga kuunzwa pane iyo iPhone 5 muna 2012.
Pinda kuti uwane smartphone nyowani kubva kuTing Mobile uye RunhareArena!
Izvo zviri kure nekushamisika kufunga vanhu vazhinji ikozvino vatenda Apple haizombofi yakatora USB-C pane iyo iPhone. Kupesana nekuita kudaro, hofori yeCupertino inotarisirwa kudzikisa madoko zvachose uye Fudge inosimbisa mishumo yekutanga nezve danho iri rinogona kuitika nekukurumidza gore rinouya pane iPhone 13 .
Apple haina kuita chakavanzika chekuona kwayo isina waya kweramangwana mumakore achangopfuura, asi matekinoroji aripo asina waya haasati asvika pakuenderana neakafanana newaya. Ndokusaka Fudge achitenda kuti Apple ichaunza imwe mhando yechaja muna 2021.
Apple inogona kuzopedzisira yati Mhene muna 2021
Panzvimbo pekumanikidza mamirioni evatengi kuti vatenge charger isina waya neiyo iPhone yavo nyowani, leaker ari mubvunzo anoti Apple iri kuronga Smart Connector-yakaita semagineti charger inozopedzisira yatsiva Mheni kana yaunzwa gore rinouya.
Ruzivo urwu runotsigira zano rakaitwa naJon Prosser mukupera kwaApril mushure mekufungidzirwa kuti mifananidzo yeApple 12 Pro Max CAD yakaita kunge inoratidza Smart Connector, chimwe chinhu chisipo pachigadzirwa chekupedzisira.
Pachine hapana izwi rekuti Smart Connector-senge chinhu chinowirirana sechibatanidzi che iPhone accessories, asi Prosser anoti Apple ine zero zvirongwa zveApple Penzura rutsigiro parizvino. Aya marongero anogona kupedzisira achinja, asi rutsigiro harufanirwe kutarisirwa gore rinouya.
Muongorori Ming-Chi Kuo akamboburitsa pachena kuti Apple yanga ichironga kubvisa zviteshi zvese kubva kune yekutanga iPhone 13 Pro Max muna 2021. Leaker Fudge, zvisinei, zvinoita sekutenda kuti chitsva chekuchaja chinongedzo chingave chiripo pane yese iPhone 13 nhepfenyuro, kusanganisira iyo isiri. -Pro mamodheru.
Chero angave marongero ekupedzisira, iko kufamba kunogona kuratidza kuve shanduko yemutambo kune ese indasitiri yekuchaja isina waya. Kana Apple ikashandisa zvese nenzira kwayo, kudiwa kwemajaja asina waya kunogona kuwedzera zvinoshamisa zvichitevera kuvhurwa.
Apple pachayo ingangoita capitalize pane switch neayo marongedzero ezvishongedzo, chimwe chinhu chinofanira kuwedzera kusimudzira mukurumbira wemataja asina waya kunyangwe dzimwe nguva asinganetsi kushandisa uye kazhinji achinonoka kupfuura echinyakare machaja.
Runyerekupe rune kuti kambani iri kushanda pamajaja maviri asina waya panguva ino. Imwe yacho inogona kushambadzirwa seMweya WeMagetsi uye ichazokwanisa kubhadharisa chigadzirwa chimwe chete panguva, ichiita kuti ive yakanaka kune iyo iPhone 13.
Vaya vari kutsvaga padhi yakakura yekuchaja vanokwanisa kuisa maoko avo paAirPower iyo, senge pfungwa yepakutanga iyo isina kumbobvira yatanga, inokwanisa kukwanisa kubhadharisa zvigadzirwa zvitatu kamwechete - iyo iPhone, Apple Watch, uye vaviri maAirPod .
Android foni isina kamera
iphone se 2020 saizi kuenzanisa
Yakanakisa Unreal Injini 4 mitambo yeApple uye iOS
Kufamba Kwevakafa: Hakuna Munhu & apos; s Land nhare yemutambo inosanganisirwa nemwaka weSere wechikamu cheTV
Samsung Galaxy Cherechedzo 20: maitiro eS Pen - nyowani uye ekare maficha
Baldur & apos; s Gedhi RPG yekuwedzera kukombwa kweDragonspear inotangisa pane Android uye iOS munaKurume 8.
LG neB & O zvinosanganiswa kupa premium odhiyo ruzivo pane iyo LG V20
Google Pixel 2 vs Galaxy S8 vs LG G6 vs iPhone 8: ina-nzira tsananguro yekuenzanisa
Webhu Kunyorera Yekuyedza Matipi
Apple yakashandura App Store kutsvaga kuti ifarire ayo maapplication pamusoro pemakwikwi